Al-Shabaab oo Dib ula Wareegtay Kudhaa kadib dagaal saacado badan qaatay. | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Al-Shabaab oo Dib ula Wareegtay Kudhaa kadib dagaal saacado badan qaatay.
Wararka ka imaanaya Deegaanka Kudhaa oo Qiyaastii 90-KM ujirta Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose, ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay Dagaalayahanada Al-Shabaab iyo Ciidamada Maamulka KMG ee Jubba.
Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo watay gaadiidka Dagaalka ayaa dhoor jiho waxa ay ka weerareen deegaanka Kudhwaa, halaas ay gacanta ku hayeen Ciidamo katirsan Maamulka KMG ee Jubba, waxaana ka dhacay kudhaa Dagaal ada u culus oo saacado badan qaatay.
Goob joogayaal kusugan Kudhaa ayaa Warbaahinta u sheegay in dagaal dhiig badan ku daatay uu maanta halkaasi ka dhacay , waxa ayna tilmaameen in hada gacan ku heynta Magaalada ay gacanta ugu jirto Dagaalyahanada Al-Shabaab.
Meydadka Ciidamo katirsanaa labada dhinac ayaa lasoo sheegaya ain ay yaalaan Jasiirada Kudhaa, waxaana hada magaalada isku fidiyay oo baaritaano xoogan kawada dagaalyahanada Al-Shabaab ee maanta dagaalka kula wareegay.
Sargaal u hadlay AL-Shabaab ayaa u sheegay Warbaahinta ku hadasha afkooda in ay dagaal kula wareegeen Kudhwaa, waxa uuna intaa raaciyay in ay hub badan ku furteen dagaalka sidoo kale ay ku dileen ciidamo badan oo katirsanaa Maamulka Jubba.
Wali si rasmi ah looma hayo qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka culus ee maanta ka dhacay deegaanka Kudhwaa, waxaana maalmo kahor magaaladaasi dagaal kula wareegay Ciidamada Maamulka KMG ee Jubba kuwaa oo maanta dib looga saaray Magaaladaasi.